Kpido: azum ahia ahia | Martech Zone
Tag: atumatu ahia ahia
Ihe omuma a sitere na Tamba, Ntughari Mgbanwe nke Ajuju, nwere ihe omuma kachasi nma maka ulo oru B2B na B2C iji kwenye ka ubochi ha na ego ha di na ahia ahia. N’ụzọ na-akpali mmasị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ọrụ edemede na imewe niile ka enyere ndị ọkachamara ọdịnaya. Jide n'aka na ị gụọ post miri emi anyị banyere ihe ahịa ọdịnaya yana otu esi ewepụta usoro ịre ahịa ọdịnaya. Na - n’ezie kpọtụrụ ọdịnaya anyị
Anyị jụrụ ajụjụ ahụ n'oge na - adịbeghị anya - ma nye nkọwa ụfọdụ gburugburu - ma usoro ịzụ ahịa ọdịnaya gị gbasara arụpụtaghị, ọnụnọ, ma ọ bụ ikike ụlọ. Nsogbu anyị na-aga n'ihu na-ahụ bụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ịkọpụta ọdịnaya na-enweghị nyocha na melite nsonaazụ. Nkọwa nke ara adịghị eme otu ihe ugboro ugboro mana na-atụ anya nsonaazụ dị iche? Ọ bụrụ na nke ahụ kọwara atụmatụ azụmaahịa ọdịnaya gị, ị nọ ná nsogbu ma dịkwa mkpa n'ezie